दिपाश्री निरौला Archives - Purbeli News
इटहरी/ नायिका दीपाश्री निरौलाले ‘राजेश हमाल महानायक हो र’ भन्दै प्रश्न सोझाएपछि उत्पन्न विवाद अझै साम्य भएको छैन । दीपाश्रीले माफि मागिसकेपछि पनि उनलाई गाली आउन नछाडेपछि चलचित्रकर्मीले आफ्नो भनाई सार्वजनिक गर्न थालेका हुन् । यसैबिच, हाँस्य कलाकार केदार प्रसाद घिमिरेले ‘महानायक’ विवादमा आफ्नो मुख खोलेका छन् । केदार लेख्छन्–‘हो दीपा दिदीको गल्ती थियो...
इटहरी/ दिपाश्री निरौलाले एक अन्तरबार्तामा दिएको महानायक अभिव्यक्ति विवाद यतिबेला चरम उत्कर्समा पुगेको छ । यहाँ सम्मकी सामाजिक संजालमा दिपाश्रीलाई अश्लील तथा तल्लो स्तरमा गाली गलौज गर्नेहरुको लहर चलेको छ । यता दिपाश्री निरौलाई डिप्रेसनको सिकार भैसकेको निर्माता अशोक शर्माको एक स्ट्याटसले बताउछ । चर्को बिरोध भएपछि कलाकारहरू बिरोध गर्नेहरुकै समर्थन गर्...
इटहरी / नेपालमा कोरोना महामारी सुरु भएसंगै सुरु भएको लकडाउनले सिनेमा नगरिमा धेरै उथलपुथल ल्यायो । फिल्म छायांकन हुन पाएन, रिलिज हुन पाएन, प्रोमोसन गर्न पाएन, यी र यस्ता कुरा त छदै छ तर नकारात्मकताको चर्चाले सिने नगरीको बाट कता ? भन्ने प्रश्न पनि खडा भएको छ । यो लकडाउनको अबधिमा धेरै झन्डै आधा दर्जन कलाकारहरू विवादको भुमरिमा फसे । सम्भवत यो छोटो अबधी...
काठमाडौँ / केहि दिन यता महानायकको बिषयलाइ लिएर सामाजिक संजालमा भाइरल भईरहेकी दिपा श्री निरौलालाइ एउटा अभिव्यक्तिको कारणले गर्दा तुच्छ गालि गलौंज तथा अपशब्द सुन्नु परेको छ । यो आम नेपाली चलचित्र क्षेत्रको लागि शुभ संकेत भने पक्कै होइन, अभिव्यक्ति स्वत्रन्त्रता नैसर्गिक अधिकार हो भने कुनै पनि बिषयमा छलफल गर्न तथा बोल्न पाउनु सम्पूर्ण नागरिकको हक हो ।...
ईटहरी/ पछिल्लो केही समय यता नेपाली सिने उधोगमा ईतिहासमै नभएको आरोपप्रत्यारोपका कुराले अब सिनेमा उधोगको बाटो कता ? भन्ने प्रश्न सिर्जना गरेको छ । लकडाउनमा बर्षा राउत देखि पुजा शर्मा, सुष्मा कार्की, दिपक राज गिरि, साम्राज्ञी राज्य लक्ष्मी शाह, दिपाश्री निरौला सम्म विवादको भुमरिमा फसे । अन्तत दिपाश्री निरौला डिप्रेशनमा समेत पुगेकी छन् । यो कुराको जानक...
ईटहरी/ पछिल्लो समय नेपालि सिने उधोगमा बोलि चिप्लिएर विवादको झमेलामा पर्ने नायिकाहरु बढिरहेका छन् । कोहि सिमा विवादको बिषयमा चिप्लिए, कोहि को ठुलो भन्ने कुरामा चिप्लिए, कोहि देशको जिल्ला र प्रदेशको बारेमा नजान्दा चिप्लिए । यता दिपाश्री निरौला भने एक अन्तरबार्तामा राजेश हमाल महानायक हैनन् भन्ने आशयको अभिव्यक्ति दिएपछि आलोचनाको घेरामा परे । यो बिषयमा ...